Ntinye na nnwale ọnwụ furu efu - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Ọnwụ nke mgbaàmà, nke na-eme n'ogologo njikọ nke eriri optic, a na-akpọ ntinye ọnwụ, na ntinye ọnwụ ọnwụ bụ maka ịlele nfu nke ìhè na-egosi na eriri fiber optic na njikọ eriri fiber optic. A na-akpọ nha nke oke ọkụ nke gosipụtara azụ na isi iyi a nyocha nnwale nloghachi. na ntinye ọnwụ na nloghachi nha niile tụrụ na decibel (dBs).
N'agbanyeghị ụdị, mgbe mgbaàmà na-agabiga na usoro ma ọ bụ ihe mejupụtara, enweghị ike izere ike (mgbaàmà). Mgbe ọkụ na-agafe na eriri, ọ bụrụ na ọnwụ dị obere, ọ gaghị emetụta ogo nke akara ngosi anya. Ọnwụ dị elu karịa, obere ego gosipụtara. Ya mere, elu nloghachi ahụ dị elu, ntụgharị uche dị ala na njikọta ka mma.
Jera gaba ule na n'okpuru ngwaahịa
-Fiber optic dobe Gịnị
-Fiber ngwa anya nkwụnye
-Fiber ngwa anya patch udọ
-Fiber ngwa anya pigtails
-Fiber ngwa anya PLC splitters
Maka ule nyocha nke eriri eriri na-arụ ọrụ site n'ụkpụrụ IEC-61300-3-4 (hodzọ B). Usoro IEC-61300-3-4 (Usoro C).
Anyị na-eji akụrụngwa ule na nyocha kwa ụbọchị, iji hụ na ndị ahịa anyị nwere ike ịnweta ngwaahịa nke ga-egbo mkpa chọrọ. Laboratorylọ nyocha anyị dị n'ime ụlọ nwere ike ịga n'ihu n'ụdị usoro nyocha metụtara ụdị ọkọlọtọ.